सावधान ! आफ्नै चुण्डि मोटरसाइकलमा बेरिएर युवतीको ज्यान गयो – Gulmiews
सावधान ! आफ्नै चुण्डि मोटरसाइकलमा बेरिएर युवतीको ज्यान गयो
१ असार २०७३, बुधबार १०:३७ Raju Gautam
असार १ गते, गुल्मी । आफ्नै चुण्डि मोटरसाइकलमा बेरिएर एक युवतीको ज्यान गएको छ । जिल्लाको वाग्ला गाविस २ निवासी २२ बर्षिया कोपीला गिरीको मंगलबार ज्यान गएको हो । उनी हस्तिचौरबाट सिर्सेनी जाँदै गरेको लु ४ प ७८२६ नम्बरको मोटरसाइकलको पछाडी बसेकी थिइन । वस्तु गाविस वडा नं १ को दुर्कनी भन्ने स्थानमा चुण्डि मोटरसाइकलको चक्कामा बेरिएपछि उनको घटनास्थलमै ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ । चालक रेसुंगा नगरपालीका १ का २९ बर्षिय सुर्य बहादुर दर्जी प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका छन् । युवतीको शव पोष्टमार्टमको लागी जिल्ला अस्पताल तम्घासमा राखिएको छ ।